भिडियो « रिपोर्टर्स नेपाल
धमलाको हमला : करिश्मा मानन्धरसँग ऋषि धमलाको रोचक कुराकानी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १९ मंसिर । सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरले पढाइभन्ने कुरा कहिले नसकिने भन्दै अब बाचुन्जेल पढिरहने बताएकी छिन् । उनले यसैवर्ष कक्षा १२ पास गरेकी
प्रचण्डलाई पनि ठग्न सक्नु ओलीको महानता हो : एमाले नेता शाही (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य दयालबहादुर शाहीले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदैगर्दा विपक्षी दलका नेताको ढोकामा गएर प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस भन्ने नेता विश्वमै दुईवटा मात्र
काठमाडौं, १८ मंसिर । पूर्व महान्याधिवक्ता एवम् नेकपा (एमाले)का नेता रमेश बडालले नेपाल बारको आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अघि नै आफूले सल्लाहकार समितिको बैठकमा पुगेर इजलास बहिष्कार गर्ने काम नगरौं भनेर
एमसीसीको विषयमा देव गुरुङ र ऋषि धमलाबीच कार्यक्रममै चर्काचर्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १८ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले यथास्थितिमा एमसीसी यही रुपमा स्विकार गर्न नसकिने बताएका छन् । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न
विशाल भट्टराईको दाबी : भीम रावल एमाले छोडेर अरु पार्टीमा जानुहुन्न (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १८ मंसिर । नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरुले पार्टीमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न खोज्दा महाधिवेशनलाई ओलिवेशन भनिएको गुनासो पोखे । उनले सर्वसम्मत् रुपमा नेतृत्व चयन
प्रधानन्यायाधीशले प्रतिगमन सच्याउन गरेको निर्णय र त्यो चिजलाई हामीले भुल्नुहुँदैन : सांसद पौडेल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हटाउनेबारे कुनै छलफल नै नभएको स्पष्ट पारेकी छिन् । हिजो राति
योगेश भट्टराईको प्रश्न–‘पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई निर्देशन गर्ने अधिकार कहाँ छ ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित सचिव योगेश कुमार भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् । हिजो राति प्राइम
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले गोलाप्रथा लागु हुनुमा जितको कसको भनेर भन्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले आफू यसपटक आफू सभापति उठ्ने बताए । उनले आफूले धेरै अघि नै सभापतिमा उठ्ने भनेर घोषणा गरिसकेको
काठमाडौं, १४ मंसिर । चर्चित नायिका तथा राप्रपाकी नेतृ रेखा थापाले अहिलेपनि राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा राप्रपा कहाँ हुन्छ ? भनेर कसैले पनि भन्न नसक्ने बताएकी